स्याम्पल लिन चिकित्सकले लगाउनु पर्ने प्रोेटेक्टिभ केयर प्रतिष्ठानले आफ्नै पहलमा बनाएर चिकित्सक र नर्शहरुलाई बाड्यो ! - जागरण अनलाइन
स्याम्पल लिन चिकित्सकले लगाउनु पर्ने प्रोेटेक्टिभ केयर (पर्सनल प्रोटिक्टिभ इकयूपमेन्ट) प्रतिष्ठानले आफ्नै पहलमा बनाएर चिकित्सक र नर्शहरुलाई बाड्यो !
घोराही, चैत ८ । दाङमा कोरोनाको स्याम्पल पठाउने क्यारियर नै छैन । काठमान्डौं बाहेक अन्त कतैपनि कोरोना चेकजाँच हुदैन । त्यसैले काठमान्डौं बाहेक सबै ठाउँवाट विरामीको स्याम्पल चेकजाँचका लागि काठमान्डौं पठाउनै पर्छ ।
तर स्याम्पल लिन चिकित्सकले लगाउनु पर्ने प्रोेटेक्टिभ केयर (पर्सनल प्रोटिक्टिभ इकयूपमेन्ट) प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै छ । त्यो पनि जनश्वास्थ्यले उपलब्ध गराएको हो । त्यो विना चिकित्सक पनि विरामीको स्याम्पल लिन मान्दैनन् । प्रतिष्ठानले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेर चिकित्सक र नर्शहरुलाई बाडेको छ । प्रतिष्ठानका कायममुकायम रजिस्ट्रार कैलाश देबले प्रतिष्ठानका चिकित्सक र नर्शहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै कोरोना भाइरसको सक्रमणबाट जोगाउन यो काम गरिएको बताए ।